Monday,9Oct, 2017 1:53 PM
बिहान उठेर कहीँ जाने योजन बनाएर मोबाइल हर्दा ब्याट्री लो भएको पाउनु भयो र चार्ज गर्छु भन्दा बिजुली पनि छैन । यस्तो हुँदाको अवश्ता निकै नै निराशजनक हुन्छ । त्यति बेला आफैसँग र विद्युत प्रधिकरणका कर्मचारीहरु माथि रिस पोख्नु बाहेक अरु के नै पो गर्न सकिन्छ र ?
सोच्दा पनि नरमाइलो लाग्ने, छुट्टी मनाउनको लागि सुन्दर र मनमोहक पहाड र तालतलैया घुम्न जानु भएको छ । उक्त मनोरम दृश्यलाई आफ्नो मोबाइलको क्यामरामा कैद गर्ने विचारले मोबाइल स्जिच अफ हुने वालामा छ । यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने त ? अवश्य पनि आफ्नै भाग्यलाई दोष लागाउने ।
आज हामी बिना विद्युत मोबाइलको ब्याट्री तिन सरल स्टेफबाट ब्याट्री चार्ज गर्ने बताउदै छौं ।
कार यूएसबी एडप्टर
फोन चार्ज गर्ने तार (यूएसबी केबल)
९ भोल्टको ब्याट्री
धातुको एउटा चिप र
यी सबै सामान जुटाए पछि तपाईंले अब ब्याट्रीबाट बिजुली निकालेर मोबाइल सम्म पु¥याउनुपर्छ । यसको लागि तपाईंले एउटा सानो इलेक्ट्रिकल फस्ल्ड तयार पार्नु पर्ने हुन्छ जसको मद्दतले मोबाइल चार्ज गर्न सिकयोस् ।
पहिलो स्टेपः धातु (मेटल) चिपलाई खोल्नुहोस् र त्यसलाई ब्याट्री एउटा पोलमा जोड्नुहोस् ।
सबै ब्याट्रीमा दुई वटा टर्मिनल हुन्छन् । एउटा पोल पल्स र अर्को माइन्स । जब दुवै पोललाई तारले जोडिन्छ तब यिनीहरु बीच निकै दु्रत गतिमा इलेक्ट्रोन्सको प्रवाह हुन थाल्छ । सबैभन्दा पहिला ब्याट्रीको माइन्स पोल तिर चिप जोड्नुहोस् ।
दोस्रो स्टेपः कार एडप्टरलाई ब्याट्रीको पल्स पोल सँग जोड्नुहोस् ।
कार एडप्टरलाई ब्याट्रीको दोस्रो टर्मिनल अर्थात पल्स पोल तिर जोड्नुहोस् । अब तपाईं इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउन सक्छौं ।
तेस्रो स्टेपः एडप्टरको धातु भएको भाग तर्फ चिपको एउटा भागलाई थिच्नुहोस्
अब चिप र एडप्टरको धातु भउको भागलाई एक–आपसमा सम्पर्क बनाउनुहोस् । यसतो गर्नाले ब्याट्री भित्रको इलेक्ट्रोन्स छिटो छिटो प्रवाह हुन सूरु गर्छ जसले विद्युत पैदा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
सबै ब्याट्रीमा इलेक्ट्रोलाइट र रासायनिक तत्व हुन्छन् । यिनीहरु बीच प्रतिक्रिया हँुदा इलेक्ट्रोन्स छिटो प्रवाह हुन्छ र विद्युत पैदा हुन्छ ।
अब तपार्इंको बिना बिजुली चार्जर तयार भयो । मात्र तपाईंले आफ्नो मोबाइल फोनको यूएसबी सकेट जोड्नुहोस् र इमरजेन्सीमा आफ्नो मोबाइल चार्ज गनुृहोस् ।